Ọgwụ Category Suppliers na Factory - China Ọgwụ Atiya Manufacturers
Oghere eriri hemodialyzer (...
Akpanwu hemodialysis ọbara ...
Hemodialysis ntụ ntụ
Sirinji Sterile maka iji otu
Sterile Syringe ejirila ụlọ ọrụ ahụike n'ụlọ na mba ofesi ruo ọtụtụ iri afọ. Ọ bụ ngwaahịa tozuru etozu nke a na-ejikarị eme ihe na subcutaneous, intravenous na intramuscular injections maka ndị ọrịa.
Anyị malitere nyocha ma mepụta sirinji Sterile maka iji otu na 1999 wee gafere asambodo CE maka oge izizi na Ọktọba 1999. A na-emechi ngwaahịa ahụ na ngwugwu otu ngwugwu ma gbanye ọgwụ site na ethylene oxide tupu ewepụta ya na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ọ bụ maka otu ojiji na nwoke ịga ụlọ ọgwụ dị irè ruo afọ atọ ruo afọ ise.
Ihe kachasị mkpa bụ Ofu Dose
Ihe nkedo ogwu hypodermic nwere ike inweta bu ihe ejiri ihe nkedo, eriri ogwu na aka nchebe. Ihe ndi eji eme ihe kwesiri iru aru ike ma ndi ogwu ethylene oxide na - acho ogwu. Ngwaahịa a bụ aseptic na enweghị pyrogen. adabara intradermal, subcutaneous, mọzụlụ, vein injection, ma ọ bụ mmịpụta nke mmiri mmiri ọgwụ maka ojiji.
Nkọwapụta ihe nlereanya: Site na 0.45mm ruo 1.2 mm
Pirinatic enweghị agịga sirinji
A na-edozi usoro ogwu ahụ site na eriri ziri ezi, na njehie dose ahụ dị mma karịa nke sirinji na-aga n'ihu.
Enweghị usoro ịgba ntụtụ
Injection Ntụtụ na-enweghị mgbu iji belata nrụgide uche nke ndị ọrịa;
Technology Nkà na ụzụ mgbasa ozi dị n'okpuru iji meziwanye ọnụọgụ ọgwụ;
Injection Ọgwụ na-adịghị mkpa iji zere mmerụ ahụ nke ndị ọrụ ahụike;
Chebe gburugburu ebe obibi ma dozie nsogbu imegharị ihe maka ọgwụ na-ewepu ọgwụ na-arụ ọrụ.
Ngwunye ọgwụ na-ekpofu ọgwụ na-ekpofu ọgwụ bụ ihe a na-ejikarị eme ihe n'ụlọ na mba ọzọ. N'ime ọrụ nlekọta ahụike, ndị ọrụ ahụike kwesịrị iji ụfọdụ sirinji buru ibu na agịga ntụtụ iji kesaa mmiri ọgwụ. A na-ejikarị ihe mgbaze aseptic nwere ike ịmepụta site na ụlọ ọrụ ọgwụ ọgwụ anyị n'ọtụtụ ebe na ahụike, yana uru mmekọrịta mmadụ na ibe ya dị mkpa. Achọrọ sirinji na-agbaze ọgwụ ka ọ ghara ịdị na-egbu egbu ma bụrụ nke na-adịghị ọcha, ya mere, a na-emepụta ya ma na-akwakọba ya na ogbako ogbako 100,000. Ngwaahịa ahụ nwere sirinji, agịga ọgwụ na-agbari ọgwụ, yana mkpuchi mkpuchi. A na-eji jaketị syringe na isi osisi mee polypropylene, a na-ejikwa roba roba mee piston ahụ. Ngwaahịa a dị mma maka ịmịpụta na ị medicineụ ọgwụ mmiri mmiri mgbe ị na-agbaze ọgwụ. Adabara mmadụ intradermal, subcutaneous na intramuscular ogwu ogbugba.
A na-ekeji insulin syringe n'ime ikike nha site na ikike aha: 0.5mL, 1mL. Ọdụ injector maka sirinji insulin dị na 30G, 29G.
Sirinji insulin na-adabere n'ụkpụrụ kinetic, na-eji nnyonye anya dabara nke isi nkpa na aka elu (ya na piston), site na ịmịpụta na / ma ọ bụ ike na-arụ ọrụ site na ntuziaka, maka ebumnuche ahụike nke ọgwụ mmiri na / ma ọ bụ ọgwụ nke mmiri ọgwụ, tumadi N'ihi na ọgwụ adakarị (ọrịa subcutaneous, igba ogwu n'akwara, intramuscular ogwu ogbugba), ahụ ike na oria mgbochi, ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, wdg
Sirinji insulin bụ ngwaahịa na - adighi ike, nke ezubere maka naanị iji ya rụọ ọrụ naanị afọ ise. Sirinji insulin na onye ọrịa bụ kọntaktị na-emerụ ahụ, oge eji ya dị n'ime nkeji 60, nke bụ kọntaktị nwa oge.
Sirinji maka ịgba ọgwụ mgbochi ọgwụ
A ga-ebido ọrụ mbibi onwe ya mgbe a gbanyechara ya, na-egbochi ojiji nke abụọ.
The pụrụ iche Ọdịdị imewe na-enyere ndị conical njikọ ụgbọala ndị injector agịga nzukọ kpamkpam retract n'ime n'ọbọ, n'ụzọ dị irè na-egbochi ihe ize ndụ nke agịga ruo maka ndị ọrụ ahụike.
Sirinji akpapu-gbanyụọ sirinji
Achọpụta ihe na-eme ka ihe na-eme ka ihe na-eme ka ihe na-eme ka ọ ghara ịdaba bụ nke a ga-ewepụtaghachi ya. The pụrụ iche Ọdịdị imewe na-enyere ndị conical njikọ ụgbọala ntụtụ injection agịga nzukọ kpamkpam amata n'ime n'ọbọ, n'ụzọ dị irè na-egbochi ihe ize ndụ nke agịga ruo maka ndị ọrụ ahụike.
1. Anụ ngwaahịa mma, zuru akpaka mmepụta akara.
2. A na-eji roba emepụta ihe na-egbochi roba, a na-ejikwa ihe dị mkpa na-eme ihe mkpuchi PP.
3. Nkọwa zuru ezu nwere ike izute mkpa ọgwụgwọ niile.
4. Nye mpempe akwụkwọ dị nro-rọba, ihe ndị metụtara gburugburu ebe obibi, dị mfe ịtọpụ.